Dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo cabsi dagaal oo laga soo sheegayo Gobolka Gedo – SBC
Dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo cabsi dagaal oo laga soo sheegayo Gobolka Gedo
Sida ay ku waramayaan wararka ka imanaya degmada Garbahaareer iyo deegaanada ka agdhow waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka jiraan dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo baqdin dagaal oo ay muujinayaan dadka deegaanka.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in dhaq dhaqaaqyada ay wadaan dhinacyada Ahlusuna waljamaaca iyo DKMG ah oo isku dhan ah iyo weliba Xoogaga xarakada Shabaab Almujaahidiin oo iyagu halkaasi ku sugan .
Qaar ka mid ah shacabka deegaanka oo la hadlay Xafiiska SBC ee Gobolkaasi ayaa muujiyay Cabsida ay ka qabaan dagaal xiliyada Soo socda halkaasi ku dhexmara dhinacyadan is haya, iyagoona sheegay in ay jirto saan saan xoogleh oo labada dhinac ku muujinayaan dagaal dhaca.
Degmada Garbahaareer ee xarunta gobolka Gedo ayaa waxaa ku sugan ciidamada DKMG ah dhinac ka tirsan Ahlusuna waljamaaca, kuwaas oo dagaal kaga soo horjeeda xoogaga xarakada Alshabaab, waxaana mar ay saxaafada ka hadleen muujiyeen in ay qorsheynayaan dagaal ka dhan ah Xarakada Alshabaab oo ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin.
Sikastaba ha ahaatee Dhaq dhaqaaqyadan ciidan iyo isku abaabulka dagaal oo ah kuwo muuqanaya ayaa cabsi xoogan geliyay dadka deegaanka iyagoona sheegay in tani ay ku soo aadeyso xili ay markii horeba taagneyd cabsiyo ay ka qabaan duqeymo cirka ah oo ay ciidamada Kenya geystaan.